Mitokona ny Mpitsabo, Tsy Voafehy Ny Boko Haram, Matahotra Ny Hianahan’ny Ebola Ireo Nizeriana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Aogositra 2014 20:19 GMT
Ireo mpiasan'ny fahasalamana anatinà ekipa mpizaha ny Ebola ao amin'ny hôpitalim-panjakana any Kenema, Sierra Leone. 30 Jona 2014. Sary an'i Tommy Trenchard. Fizakàmanana Demotix
Olona 672 no maty nanerana an'i Ginea, Liberia ary Sierra Leone noho ny firongatr'ilay otrikaretina mahafaty, Ebola, farany teo tany Afrika Andrefana, izay heverina ho ratsy indrindra hatramin'ny nahitana azy tamin'ny 1976, araka ny tatitry ny Fikambanana Iraisam-pirenena misahana ny Fahasalamana.
Tonga any Nizeria izany otrikaretina izany amin'izao, raha maty tany Lagos, tanàna misy mponina 21 tapitrisa, ny lehilahy Liberiana iray nitondra ny otrikaretina. Nohamafisin'ny Minisitera Federalin'ny Fahasalamana fa nozahàna io lehilahy io rehefa safotra teo am-pahatongavana tao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Murtala Mohammed any Lagos.
Sarintanin'i Afrika Andrefana (2014) ahitana ny otrikaretina Ebola tamin'ny 20 Jolay 2014. Sary navoakan'ny CDC ho azon'ny rehetra jerena.
Hatreto, nahaisa tranga 1.201 ireo mpiasan'ny fahasalamana hatramin'ny nizahana ity aretina ity voalohany tamin'ny volana Febroary. Eo ho eo amin'ny 60 isanjaton'ny olona tratran'ity otrikaretina ity tamin'ny fiparitahany farany no maty.
Nodorana tany Lagos ny fatin'ilay lehilahy Liberiana, ary nakatona sy natoka-monina haraha-maso ilay hopitaly tsy miankina nitsaboana azy.
Mety ho loza ho an'i Nizeria ny fisehon'io otrikaretina mifindra be io. Ao anatin'ny ady amin'ny vondrona Islamista mpikatroka mafana fo, Boko Haram, izay namono, nanapatapaka ary naka olon-tsotra an-keriny tanatin'ireo efa-taona lasa izao ny firenena. Ary koa, eo ho eo amin'ny 30.000 ireo mpikambana ao anatin'ny Fikambanan'ny mpiasa Nizeriana misahana ny Fahasalamana mitokona mandritra ny fotoana tsy voafetra mandra-pisian'ireo fiovàna sasany eo amin'ny rafitry ny fahasalamam-bahoaka. Nantsoin'ireo mpanao tsikera ho “tsy azo hiaretana” ny fangatahan'izy ireo. Tsy nety niverina niasa ny fikambanana taorian'ny nahafatesan'ilay lehilahy Liberiana noho ny Ebola tany Lagos.
Mifindra amin'ny alàlan'ny tsiranoka mivoaka amin'ny vatan'ny biby mitondra azy toy ny ramanavy sy ny rajako ny otrikaretina Ebola. Izany no antony nandravan'io valanaretina io ireo faritra izay mihinana ny hena avy any ambanivohitra, na avy amin'ny bibidia. Mety mifindra amin'ny olona samy olona ihany koa ilay otrikaretina amin'ny alàlan'ny fifampikasohana mivantana amin'ny rà, ny hoditra vaky an'ny olona voany na ny faty mitondra ny otrikaretina. Ahitana ny fanaviana, harerahana, malohilohy, aretin'andoha, fivalanana ary fahaverezan-drà ivelany sy anatiny ny soritr'aretina.
Niady hevitra ny amin'ireo loza mety hateraky ny valanaretina Ebola ireo Nizeriana mpampiasa aterineto satria mety manavesatra ny firenena ny valanaretina Ebola. Nanoratra tao amin'ny Twitter i Chuba Ugwu, mpahay siansa eo anelanelan'i Lagos sy Londra:
Andriamanitra ô! Aza avela hisy ny tantaran'ity #Ebola ity. Tena hamono anay rehetra tanteraka mihitsy ny ady amin'ny Boko Haram sy ny valanaretina #Ebola indray miaraka.
Nampiàko io fijery io ihany koa i @9jaBloke any Londra:
Tompo ô! Efa ratsy ny fandriampahalemana. Raha voamarina io tahotra ho amin'ny Ebola io, dia tena tafahoatra loatra. Ny famindram-ponao no tadiavinay!
Tsindrian'i Nego any Lagos ny fifandrifiam-potoana tena mampihorohoro eo amin'ny fitokonan'ny mpitsabo sy ny fahatongavan'ny Ebola any Nizeria:
Ity Ebola any Nizeria ity!! Hmmmm! Aza mananihany ôô, Miaraka Amin'ny Fomba Fitokonan'ireo Mpitsabonay.
Nitebiteby ny amin'ny fahasalaman'ny zaza amam-behivavy ilay mpitendry lokanga, Godwin Strings:
Ny ankizy sy ny vehivavy mpivarotra no tena mety ho voan'ity valanaretina Ebola ity. Heveriko fa laharam-pahamehana ny fanaovana fanentanana ho azy ireo.
Tsy natokisan'i Uyi Omorhienrhien hanome vaovao momba ny Ebola amin'ireo mpampiasa aterineto ireo mpitoraka bilaogy ao anatin'ny firenena:
Tsy hohazavain'ireo mpitoraka bilaogy eto amintsika amin'ny olona ny momba ity Ebola ity. Matokisa azy ireo ho voalohany hampahafantatra anao raha nihinana moi moi [pudding nizeriana nomasahana tamin'ny entona ary vita amin'ny tsaramaso mainty maso voasasa sy voavaofy, afangaro amin'ny tongolo sy dipoavatra] i Beyonce.
Nizara sary fanentanana iray i Henry Okelue mba hanaparitahana fahalalana ilaina momba ilay otrikaretina:
Voalaza amin'ny fomba ôfisialy fa nisy olona matin'ny otrikaretina Ebola tany Lagos. Eto no ahalalanao ny momba ilay otrikaretina.
Nanentana ny tsirairay mba hadio i @onose10w :
Tsy vazivazy ity otrikaretina Ebola ity ôô, manasà tànana mandrakariva……aleo misoroka toy izay mitsabo….. Mitandrema
Navadik'i @Dimeji_W ho vazivazy izany :
Tsy misy atahorako ity resaka Ebola ity. Hiditra anatin'ny klioba tahaka izao aho pic.twitter.com/JJrrljT6El.
Saingy tsy nankasitraka ireo vazivazy momba ny Ebola i @daveek10:
Bitsika tsipalotra: tsy maintsy avadikareo ho hanihany avokoa ve ny zava-drehetra ry zalahy? Tsy mampihomehy ireto vazivazy momba ny Ebola ireto